Oovimba abagciniweyo be-EUR / CHF- Iphepha 2 le-3
Udidi: YeEUR / CHF
I-EURCHF ifumana i-Respite kwi-1.05470 njengoko iSlayidi ezantsi kweChaneli
Ukuhlaziywa: 3 Novemba 2021
Uhlalutyo lwexabiso le-EURCHF - ngoNovemba 3
I-EURCHF ifumana ukuphumla kwinqanaba lenkxaso yeveki ye-1.05470. Eli linqanaba lesibini apho imarike ifumana ukuphumla ukususela ekuqhubeni kwinqanaba lexabiso elibalulekileyo kwi-1.07010. Inqaku lokuqala apho imarike yayinokumiswa kwexeshana yayingaphezulu kwe-1.06580 inqanaba elibalulekileyo. I-EURCHF ichukumise kuyo nge-21 ka-Okthobha. Kwelo nqanaba, imarike yenziwe ukuba ihlehlise umva ukuze iphinde ivavanywe ngaphantsi kwe-1.07010 ngaphambi kokuwa kwemarike kuqhubeke.
Imimandla ephambili ye-EURCHF
Iindawo zokuchasana: 1.09320, 1.07390, 1.07010
Iindawo zokuxhasa: 1.06580, 1.05470, 1.05040
I-EURCHF yexesha elide iTrend: Ukuma
Imarike ye-bearish yangena ngamandla apheleleyo xa ixabiso lifumana ukuchasana okuqinileyo kwi-1.09320. Kwakukho ukuhla kwangoko kwimarike, kodwa imarike ifumana ukuphumla kwindawo ebalulekileyo ye-1.08360. Ixabiso lihlala kule ndawo kwiintsuku ezisixhenxe ezizayo zokurhweba njengoko uxinzelelo lwe-bearish lunyuka ngokuchasene nalo. Ngomhla wama-30 kaSeptemba, i-EURCHF yawela phantsi kobunzima boxinzelelo kwaye yaqala ukuhla inyuka ngomjelo ohlayo.
Njengoko imakethi isityibilika ezantsi, iqala ukufumana ikhefu ngaphezulu kwe-1.06580, apho irhola ngasemva kwaye iqhubeka nokuwa. Ngoku kukho ukumisa okwethutyana kufikelele kwi-1.05470, apho imarike ibuyela kwi-1.05890. I-EURCHF iyawa kwakhona emva kokubonisa ikhandlela elomeleleyo le-bearish, kodwa ihlala ibona ukuba inkxaso ye-1.05470 iya kuvelisa ngokulula. Isantya se-Bearish, kwelinye icala, sihlala somelele kakhulu, kunye ne-EFI (i-Elder Force Index) kunye ne-RSI (i-Relative Strength Index) imigca yesiginali ihla ngokukhawuleza.
I-EURCHF yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: UkuHamba
Itshathi yeeyure ze-4 ibonisa ukuba imarike ine-spell ngaphantsi komgca ophakathi wesiteshi esihlayo ngaphambi kokunyuka ngaphezu kwayo. Ixabiso laze lazama ukuphuma kumda ophezulu ngomhla we-20 ka-Oktobha kodwa lehla ngenxa yoxinzelelo lwe-bearish. Imarike ngoku yehla ngaphantsi komgca ophakathi kwakhona. Kodwa nangona kunjalo, umgca wamandla we-EFI unyuke waya kutsho ngaphantsi nje kwinqanaba elingu-zero. Oku kubonisa ukuba intshukumo ethile ye-bullish ephantsi iqalile. Umgca we-RSI uphinde waphuma kummandla othengisiweyo kwaye ngoku ujonge phezulu.
Ukuphefumla kwinqanaba lexabiso le-1.05470 kunokukhokelela ekuhlanganiseni kweemarike, eziza kuvumela iinkunzi zeenkomo ukuba zingene kwiimarike zokuguqulwa.
tags Itshathi yemihla ngemihla, EURCHF, Ulindelo lweNtengiso, Price Action, Uhlalutyo Technical
I-EURCHF iphantsi koxinzelelo lokuhlala iphosa
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCHF-Okthobha 26
I-EURCHF iphantsi koxinzelelo lwabathengisi ukuba baqhubeke bewa. Oku kuye kwaba njalo ukususela ekubeni imarike yafika kwinqanaba lokubonelela nge-1.09320. Kwabakho ukwaliwa kwangoko kwaye i-EURCHF yawela phantsi. Ukusuka apho, i-plunge iqhubekile kwaze kwaba yilapho ixabiso lawela kwinqanaba lexabiso le-1.08360. Abathengi bekulindeleke ukuba bathathe ithuba lokuphazamiseka kubathengisi kodwa khange bayenze kwangexesha. Kubekho okunye ukutshona kwezoqoqosho njengoko amanqanaba amaninzi angundoqo aye aphulwa. I-EURCHF okwangoku inokuphefumula kwi-1.06720.
Amanqanaba e-EURCHF abalulekileyo
Amanqanaba obonelelo: 1.09320, 1.08360, 1.07390
Amanqanaba eMfuno: 1.07010, 1.06720, 1.06290
I-EURCHF yexesha elide yokuhamba: Bullish
Kubekho utshintsho olwenziwa rhoqo kwixesha lemarike njengoko abathengisi kunye nabathengi bebenokutshintshana ngokulawula imarike. I-bullish tenure eyaqala unyaka yaphela njengoko ixabiso lawela phantsi kwe-1.09890 inqanaba elibalulekileyo. Imakethi iya kuhlala ingena kude kube yi-1.07010 xa uvuselelo lwe-bullish lwenzekile kwaye nangona abathengisi balwa, abathengi baphumelela. I-bullish tenure ngoku iphelile kwi-1.09320.
Imakethi yaqala ukuwa phantsi koxinzelelo, idlula kwinqanaba lexabiso leveki kwi-1.08360. Imakethi yahlala iwa de ixabiso lalivalelwe phakathi kwe-1.07390 kunye ne-1.07010. Emva kweentsuku ezili-11 zokurhweba, i-EURCHF yagrumba ezantsi kwakhona. Kodwa ngoku kukho ukutsalwa kwinqanaba lemfuno ye-1.06720. I-Oscillator ye-Stochastic iye yahlala kwindawo ethengisiweyo ixesha elide. Oku kuthetha ukuba ukuguqulwa kwemarike kusondele.
I-EURCHF yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Bullish
Ngamafutshane, imarike sele iqalile ukwenza iintshukumo zokuvuselelwa kwe-bullish kwaye into yokuqala ekufuneka yenziwe kukurhweba ukuya kwinqanaba le-MA le-20 (i-Moving Average). Emva koko, ukudlula kwinqanaba lexabiso le-1.07010 kunye nokubamba ngaphezu koko kubalulekile ukukhaba i-bullish tenure. I-Stochastic Oscillator yehlile kumda wengingqi ethengwe ngokugqithisileyo kwaye isabela kumda wengingqi ethengiswa kakhulu.
Intshukumo yemarike elandelayo iya kugqiba umkhombandlela. Ukuhla kumgca wayo wesignali ngeli nqanaba kuya kubonisa ukuyeka okwethutyana ngabathengi.
Abathengi be-EURCHF bayasilela ukubamba ngaphezulu kwe-1.08360
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCHF-Okthobha 12
Abathengi be-EURCHF bayasilela ekugcineni ukubamba kwabo ngaphezulu kwenqanaba eliphambili le-1.08360 kwaye intengiso ithathe inyani ukuya kwi-1.07230. Kwindlela yayo ezantsi, ixabiso lalibanjwa kumanqanaba ahlukeneyo abalulekileyo abandakanya i-1.07830 kunye nenqanaba le-1.07390. Ukusilela kwabathengi ukugcina ukubamba ngaphezulu kwenqanaba eliphambili le-1.08360 ngoku kunciphisile imarike kubathengisi abenze ixabiso kwi-bearish.
Amanqanaba aBalulekileyo kwi-EURCHF
Amanqanaba okumelana: 1.07830, 1.08200, 1.08930
Amanqanaba enkxaso: 1.07390, 1.07230, 1.07010
Indlela ye-EURCHF yeXesha elide: Qalisa
Abathengi baqinise amandla nge-24 ka-Agasti emva kokuba amaxabiso eguquguqukile kwinqanaba lexabiso le-1.07230. I-EURCHF yanyuka kwangoko yaya kwi-1.07830, apho ukubuyiswa okuncinci kwenzeka ngaphambi kokuba imarike iqhubeke nokunyuka kwayo. Olunye uhlengahlengiso lwenzekile ngezantsi kwendawo enganyangekiyo ngeveki ngo-1.08200 apho amaxabiso abuyela kwi-1.07830 ukuya entwasahlobo edlulileyo kumgca wokumelana ngeveki.
Ukuya phambili, iinkunzi zeenkomo ekuqaleni ziyasilela kwinqanaba elilandelayo elilandelayo ngo-1.08930, kodwa ukuphinda-phinda kabini ukubuyela kwindawo eyomeleleyo yeveki kuqhuba intengiso phezulu. Abathengi banokulawula ukufikelela kwinqanaba le-1.09320 ngaphambi kokuba imarike isilele kwakhona. Emva koko, amaxabiso abuyela kwindawo eyomeleleyo yeveki. Abathengi bazamile ukugcina intengiso kweli nqanaba. Emva kweentsuku ezisixhenxe zokurhweba, imarike yehlile.
Imakethi ihlala ikwi-downtrend, eqinisekiswe lixesha le-EMA 50 (Umndilili wokuHamba ngokuPhakathi) ohamba ngaphezulu kwamakhandlela eeyure ezi-4. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo itshathi yemihla ngemihla apho i-EFI (i-Elders Force Index) yayijule nzulu kwixabiso elibi, kwixesha elifutshane (itshathi yeeyure ezi-4), umgca wamandla unyukele kwixabiso elifanelekileyo. Esi sisikhombisi kumthamo wabathengi abasebenza ngasemva ukuphakamisa ixabiso kwakhona. Okwangoku, imarike iyaguquguquka malunga ne-1.07230 kwaye abathengi bazama ukulwa nemarike kubathengisi. Ukuba baphumelele, i-EURCHF iya kuqala inyuke iye kwi-1.07830.
I-EURCHF isondela kumanqanaba enkxaso yokubuyisa umva ngokuqinileyo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCHF-Okthobha 5
I-EURCHF isondela kumanqanaba enkxaso eyomeleleyo emva kokutyibilika kwinqaba eyi-1.08360. Kwindlela yayo ezantsi, ixabiso lazama ukuvuseleleka kwinqanaba lexabiso le-1.07830 nge-1 ka-Okthobha, kodwa imakethi ekugqibeleni yabethwa phantsi kwaye i-euro yahlala ikwimeko ebuthathaka ngokuchasene ne-Swiss franc. Ukukhawuleza kokuhlawula amatyala ngoku kusondela kuthotho lwamanqanaba enkxaso awomeleleyo anokubangela ukubuyela umva kweemarike.
Iindawo eziXabisekileyo ze-EURCHF
Amanqanaba okumelana: 1.07830, 1.08360, 1.09320
Amanqanaba enkxaso: 1.06720, 1.07010, 1.07230
Amanqanaba enkxaso alele ngokukodwa kwi-1.07230 kunye ne-1.07010 inoxanduva lokugcina iibhere zisuka ngomhla we-3 ukuya kuma-25 ka-Agasti. Oku kwavumela abathengi ixesha elaneleyo lokuqokelela amandla kunye nokuguqula intengiso. I-euro emva koko yampontshelwa de yafumana uxhathiso olomeleleyo kwi-1.08930. Oku kukhokelele ekubeni kwehle kwinqanaba lenkxaso elomeleleyo elincedileyo kwintengiso yokudlula kwi-1.08930 yokumelana.
Iibhere zicofe izixhobo kwakuba imakethi ifikelele kwi-1.09320 kwaye isibane se-bearish esasetyenziselwa ukuqhubela ixabiso ezantsi. I-EURCHF izamile ukubamba ngaphezulu kwe-1.08360 zone eyomeleleyo, kodwa iye yehla phantsi koxinzelelo lwe-bearish, ikwaphula ixesha le-MA 50 (Ukuhambisa Umndilili) owawuyigcina ekuqaleni. I-Stochastic Oscillator ibijikeleza ecaleni kummandla ogqithileyo, inika abathengi ixesha lokusebenza kunye nokubhukuqa imarike.
Iimarike zihlala zihlala kwi-downtrend kwitshathi yeeyure ezingama-4 njengoko ii-MA zilala ngaphezu kwamakhandlela angama-4. Imakethi okwangoku isabela ngaphezulu kwe-1.07390. Oku kwenzeke nakwinqanaba lexabiso le-1.07830 ngaphambi kokuba ixabiso lihle. Ke ngoko, intengiso kusalindeleke ukuba yehle ngokuqhubekekayo, ubuncinci ukuya kwi-0.7230 ngaphambi kokuba iinkunzi zeenkomo ziqale ubunjineli ukubuyela umva kwintengiso.
Iinkunzi ze-EURCHF ziShiye iSteam ukuze ziqhubeke neRally yazo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCHF-Septemba 28
IINKUNZI ze-EURCHF ziphelelwe ngumfutho kumnqweno wazo wokuthatha intengiso phezulu. Oku kuza emva kokuba intengiso inikwe amandla kuthintelo lwe-1.08190. Iimpawu zobuthathaka beenkunzi zeenkomo zaqala ukubonakala nge-1.09000. Ixabiso liye lahla kwakhona ukufumana inkxaso ngo-1.08190. I-EURCHF iguqukile kulo mmandla kwiintsuku ezi-6 ezizayo ngaphambi kokuba ityhale ngaphezulu kwayo, kuphela ziinkunzi zokudinwa kunye nokuwisa imarike kwakhona ngaphantsi kwe-1.08190.
Amanqanaba aphambili e-EURCHF
Amanqanaba okumelana: 1.09000, 1.09970
Amanqanaba enkxaso: 1.08190, 1.07200
Isizathu somsebenzi weenkunzi zeenkomo kukuba bazama ukuqhuba imarike ngokuchasene noxinzelelo olukhulu lwe-bearish i-EURCHF ibisoloko iphantsi kweenyanga ezi-5 ezidlulileyo. Iinkunzi zaqala iphulo lazo nge-9 ka-Agasti. Inzame yokuqala yokuphakamisa imarike yahluthwa kufutshane nenqanaba eliphambili le-1.08190. Ke ngoko, amandla amaninzi kwafuneka achithwe kwityala lesibini.
Xa sele benikwe amandla kwinqanaba elibalulekileyo le-1.08190, iinkunzi zeenkomo zishiyeka zinzima ukuqhubeka nephulo. Okwangoku, ixabiso liye lehla laya kwi-1.08190, kwaye kwinkqubo, ikwehlile ngezantsi kwexesha le-MA 20 (Ukuhambisa umndilili). Isalathiso se-RSI (Isalathiso Samandla Ahlobene Nesalathiso) sibonisa ukuba imeko yangoku yentengiso kwitshathi yemihla ngemihla ikukulingana, emva kokuba yehlile ejikeleze i-50 uphawu lwetshathi ye-RSI. Imarike ishiyelwe ukuba ngubani oyifunayo ngakumbi - abathengi okanye abathengisi?
I-EURCHF yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Qalisa
Intengiso iyaqhubeka kwindlela esecaleni kwitshathi yeeyure ezi-4. Ixabiso linokubonwa lisihla kwaye lisihla kwisithuba se-MA kwinkqubo. I-RSI yetshathi yeeyure ezi-20 ikwabonisa intshukumo ye-wavy yomgca wayo wesiginali, nangona kunjalo, ngezantsi komgca ophakathi. Oku kunika i-bearish bias kwimarike okwangoku, oko kuthetha ukuba amaxabiso anokubuyela kwi-4. Umfutho omtsha weenkunzi zeenkomo ungatyhala imarike ukuba iphinde ibuye kwi-1.07200, enokuthi inyuse amaxabiso ukuya kuthi ga kwi-1.09000. Ithontsi lijongeka ngakumbi.
I-EURCHF iyasabela kwinqanaba le-1.08700 elibalulekileyo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCHF-Septemba 21
I-EURCHF isabela kwinqanaba elibalulekileyo le-1.08700. Ukusukela ukukhupha inqanaba lenkxaso le-1.07400, ixabiso belikwindlela eqinileyo yokuqhubela phambili. Oku kunokubonwa ngamakhandlela ama-8 alandelanayo aphakamisa intengiso ngaphezulu kwenqanaba eliphambili le-1.08700. Nangona kunjalo, okoko inyuka ijikeleze eli nqanaba, i-EURCHF ibisabela ngokuhla ngezantsi kwaye ibhabhule ngaphezulu kwenqanaba ngokuphindaphindiweyo ngokungazinzi.
Imimandla ebalulekileyo ye-EURCHF
Amanqanaba okumelana: 1.08700, 1.09190, 1.09860
Amanqanaba enkxaso: 1.08330, 1.07830, 1.07400
Iimarike zibhukuqe ixesha langaphambili le-bearish kwi-bullish, kusetyenziswa inqanaba lenkxaso le-1.07400. Impembelelo yenqanaba lenkxaso ifikelela kwi-1.07000. Xa amaxabiso atshona kwinqanaba nge-30 kaJulayi ka-2021, yehla kancinci ezantsi ngaphambi kokubuyela umva emva kokubonisa izibane ezimbini zokujikeleza eziphezulu. I-EURCHF emva koko yavela apho, yaphinda yapheliswa ngo-1.08330, eyathi yaphosa ixabiso emva ko-1.07400.
Kwakhona, i-EURCHF yavela emva kokuphendula kummandla wenkxaso, ukuphinda uzame inqanaba njengoko lalinyuka linyuka ngokungazinzi. Imakethi yakwazi ukugqitha i-1.08330, kodwa yema kancinci kwaye yaqala ukukhupha malunga ne-1.08700, eyindawo yoxinzelelo phakathi kweenkomo kunye neebhere. Ngaphandle kokuguquguquka kweli nqanaba, i-Parabolic SAR (Yima kwaye uphinde ubuye umva) inamachaphaza amaninzi ngaphantsi kwamakhandlela emihla ngemihla kunangaphezulu kwayo, oko kuthetha ukuba ngaphezulu kolawulo olungqongqo. Isalathi samandla esihlobo samandla sihlala kwisiqingatha sokuthenga.
Imakethi okwangoku i-bearish kwixesha elifutshane kwitshathi yeeyure ezi-4, eqinisekisiweyo yiParabolic SAR, okwangoku ethe nca ichaphaza elingaphezulu kwesibane seyure ezi-4. Kwakhona, umgca we-RSI uye wangena kwisiqingatha esithengisa. Ngaphandle kwexesha elifutshane lomsebenzi we-bearish, imakethi ngokubanzi ibisenza ukuphakama okuphezulu kunye nokuhla okuphezulu ukulungela intengiso kwipateni yonxantathu eyandayo.
I-EURCHF kulindeleke ukuba yenze umva nangaliphi na ixesha kungekudala, eya kuthi inyuse intengiso iye kwi-1.09190, apho kulindeleke ukuba iqhume iqhubeke nokunyuka okuphezulu.
Cinezela i-EURCHF Bulls kwiBullish Foray
Ukuhlaziywa: 14 Septemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCHF-Septemba 14
Iinkunzi ze-EURCHF cinezela phambili kunye neemvakalelo zazo ezinamandla. Imakethi ikuguqule ukwehla kwexabiso ebelonakalise imarike iiveki ezininzi xa ibisezantsi ngo-1.07200 ngomhla we-5 ka-Agasti ka-2021. I-rally entsha yaxhathiswa okokuqala ngo-1.03480, kodwa isikhuthazo esomeleleyo esivela kwinkxaso ye-1.07200 sanceda iinkomo zacinezela ngaphaya 1.08340. Le ntshukumo yenze imarike ukuba yenziwe kabini.
Iindawo zokuchasana: 1.09970, 1.09000
Iindawo zokuxhasa: 1.08340, 1.07200
I-rally yangoku ye-rally ibuyela umva ngokuthe ngqo kwisilayidi se-bearish ethe imarike yafumana iiveki ezimbalwa ekuqaleni konyaka ukusukela ngomhla we-3 kuMatshi ngo-2021. Yayikukuwela ngaphaya komhla we-8 kaJulayi owakhokelela ekubeni iinkunzi zenkomo ziqale ukuthatha amanyathelo ukufumana imarike. Inqaku lokuqala lenkcaso laye lafika kwi-1.09340 yenkxaso, kodwa uxinzelelo olusezantsi lwalutyhala. Kodwa oku bekungazukwenzeka, njengoko inqanaba elilandelayo lenkxaso lalikwi-1.07200.
Impembelelo yenkxaso ye-1.07200 yayifikelele kwi-1.06780, ke yayixinene ngokwaneleyo ukuba inyuse ixabiso liye phezulu, njengoko lalinjalo ngaphambili. I-NZDUSD ngoku ityhilwe yipateni ephantsi kabini yetshathi ngaphezulu kwenqanaba lesitshixo le-1.08340. Ixabiso libuyile umva ukubuyisa inqanaba lokucinezela ngaphezulu. Umgca wesiginali kwisalathi samandla esisiKhombisi esiDibeneyo usikhuphile kumgca ophakathi ukudubula uye phezulu.
Imakethi ngoku iyehla okwesibini emva kokubetha i-1.09000. Ukwehla kwesibini kuya kukhokelela kwixabiso kukuphinda kubekhona ukuxhaswa kwi-1.08340. oya kuthi emva koko atyhale ixabiso liphezulu. Zombini i-RSI kunye ne-Stochastic Oscillator ziyavuma ukubuyiswa kwemarike yangoku. I-Stochastic Oscillator, ngakumbi, yehlile ukusuka kwingingqi ethengwe kakhulu ukuya kwinqanaba le-50 kwaye isetelwe ukwehla njengoko ixabiso liwela ukuphinda ubuye kwi-1.08340.
IINKONZO ZE-EURCHF Zityhala Emarikeni zisebenzisa iipateni ezimbini zetshathi ezantsi
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCHF-Septemba 8
Iinkunzi ze-EURCHF zityhala ixabiso lisebenzisa iphethini yetshathi engezantsi. Esi siphumo ukuguqulwa komgaqo wentengiso, ukubeka ukuhla kwexabiso. Ukuhla ngokuthe ngcembe kumaxabiso kusolula umva nge-4 ka-Matshi 2021, emva kokuba i-EURCHF inyukele kwinqanaba eliphambili le-1.11550. Ngaphandle kokwehla ngokuthe ngcembe kwintengiso, amaxabiso ahlala ekwi-uptrend de aqhekeza umgca we-8 kaJulayi ka-2021.
Amanqanaba okumelana: 1.09970, 1.11550
Amanqanaba enkxaso: 1.08340, 1.07200
Iibhere ziye zehla ngamandla amakhulu okophula umgca wokuhla, emva koko imarike yaphulukana namandla athile. Yadityaniswa ngaphezulu kwenqanaba le-1.08340 ngaphambi kokuba iibhere zivuselelwe ukuntywila kwimakethi. Ixabiso liye labuyela umva ukuphinda liphinde lenze inqanaba le-1.08340 ngaphambi kokuhla liye kwi-1.07200, inqanaba lenkxaso eyomeleleyo yeveki. Inqanaba lenkxaso layinyusa intengiso ngokukhawuleza.
Ixabiso laliwa ngo-1.08340, lisika irali elifutshane, kodwa iinkunzi zeenkomo zaphinda zadityaniswa kwinqanaba lamaxabiso eli-1.07200 ngeveki ukupompa intengiso kwakhona. Le ntshukumo inyukayo yenze ukuba imarike ibe yipateni esezantsi ephindwe kabini, esele yaphule i-1.08340 yenqanaba lokumelana. Ngokwenza njalo, amaxabiso ngoku athengisa kufutshane nebhendi ephezulu yeBollinger Band, kunye nomgca wayo ophakathi usebenza njengenkxaso. Ukuhamba komndilili woTshintsho lweDvergence okwangoku kubonisa imivalo ye-histogram eyomeleleyo kunye nemigca yayo inyukele phezulu ukubonisa ukuba imakethi igcwele amandla okomeleza.
Itshathi yeeyure ezi-4 ibonisa ukuba bekukho ixesha elifutshane lokudityaniswa kwinqanaba lokuxhasa le-1.07200 ngaphambi kokuba amaxabiso anyuke okwesibini. Kwaye ekunyukeni, imarike ibishukuma kumgca ophakathi weBollinger Band kwindlela eya phezulu. Nangona kunjalo, kwiiyure ezili-12 ezidlulileyo, ixabiso lehla laya kwinqanaba eliphantsi leBollinger, eliye laliqhubela phambili nangaphezulu kweBollinger Band ephezulu.
Imivalo ye-MACD ye-bearish ibonisa ukuba ixabiso lifumene iblip yexeshana ngokukhawuleza kodwa ngoku liyachacha, njengoko kungqinwa yeyona mivalo iphakamileyo inyukayo. Okwangoku, imigca ye-MACD ihlala iphakame ngaphezulu kwenqanaba le-zero, kwaye kukho omnye umnqamlezo oya phezulu.
Imakethi igcina amandla ayo kwaye ngoku ijonge ukufikelela kwi-1.09970.
tags Itshathi yemihla ngemihla, YeEUR / CHF, Ulindelo lweNtengiso, Price Action, Uhlalutyo Technical
I-EURCHF isondela kwinqanaba eliPhambili kwaye isetelwe ukuGweba kwakhona
Ukuhlaziywa: 31 Agasti 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCHF-Agasti 31
I-EURCHF isondela kwindawo ebalulekileyo kwaye kulindeleke ukuba ibuye umva kwicala eya ngakulo. Imakethi ibonakala ngathi iphakathi kwenqanaba eliphambili le-1.08410 kunye nenqanaba le-1.07150 lenkxaso. Iinkunzi zeenkomo kunye neebhere ziyaqhubeka nokulwa ukuze zilawule njengoko amaxabiso esondela kweli nqanaba, evelisa iphethini yetshathi engezantsi. I-EURCHF isetelwe ukubuyisela umva kwicala njengoko imakethi isondela kwinqanaba leqhosha lokumelana ne-1.08410.
Amanqanaba okumelana: 1.08410, 1.0800
Amanqanaba enkxaso: 1.07410, 1.07150
Imakethi yaqhekeka okokuqala kwicala elisezantsi kwinqanaba eliphambili lokumelana ne-1.08410. Njengokuba imakethi iqala ukuphinda ilizame eli nqanaba liphambili le-1.08410, kubonakala ngathi kukho ukubuyela umva. Ixabiso emva koko liphinde lahla kwakhona, labuyela kwinqanaba eliphambili le-1.07150. Njengoko isondela kwinqanaba eliphambili lokumelana ne-1.08410, i-EURCHF idlula kumanqanaba amaninzi abalulekileyo. IiBulls ziyaqhubeka nokuqhuba ixabiso liphezulu, kwaye ukubuyela umva akunakuphepheka.
Isibonisi se-MACD (Ukuhambisa umndilili wokuDibana kunye nokuDibana) sibonisa ukuba i-EURCHF iyaqhubeka nokufikelela kwinqanaba eliphambili le-1.08410. Oku kuphakamisa ukuba ixabiso liya kuqhubeka likhuphuka ngaphambi kokuphinda liqhubeke phantsi. I-MACD ikwabonisa ukwanda kwe-histogram eluhlaza, ebonisa ukukhula kweemarike. I-stochastic Oscillator, kwelinye icala, ibonisa umndilili ohamba usondela kumanqaku angama-80.00. Oku kuthetha ukuba ixabiso liya kutshintsha icala xa lisondela kwindawo ethengiweyo.
Kwakukho retest kwinqanaba eliphambili le-1.07150 kwitshathi ye-4hr. Xa amaxabiso aqhekeka nge-1.07410, kwabakho ukubuyela umva okubonakalayo ngaphambi kwereyali. Oku kungenxa yongquzulwano phakathi kwabathengi nabathengisi kuloo ndawo.
I-EURCHF ngoku iphinda ibuye i-1.0800 ngaphambi kokuba isondele kwinqanaba eliphambili le-1.08410. Iminqamlezo emininzi iveliswa yi-MACD xa ingaphezulu kwenqanaba le-0.00. Oku kuphakamisa ukuba intengiso yentengiso iza kuphela. I-Stochastic Oscillator ikwangaphezulu kwe-80.00, ebonisa ukwehla okusondeleyo kwisantya sokunyuka njengoko intengiso ilungiselela ukubuyela umva.
I-EURCHF igcina iiNdawo eziPhononongayo njengoko iQhubeka kuLuhlu
Ukuhlaziywa: 25 Agasti 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCHF-Agasti 24
I-EURCHF igcina ukubuyela umva phakathi kwenqanaba eliphambili lokumelana ne-1.0070 kunye nenqanaba lenkxaso le-1.0700. Imakethi igcinwe umva ngumkhwa we-bearish. Oku kungenxa yokwaliwa kwexabiso phakathi kwemimandla emibini ephambili. Imakethi ye-EURCHF ibisilwela ukuqhubeka nenqanaba layo le-bearish kwaye ibilinga kwakhona. Ixabiso kulindeleke ukuba lifumane isantya esincinci sokugcina njengoko ligcina inqanaba lokuqokelelana.
Amanqanaba okumelana: 1.07700, 1.09050
Amanqanaba enkxaso: 1.07000, 1.08350
Imakethi yaqala ukuwa kwaye yahamba kwi-bearish trend emva kokuphinda ibuye inqanaba lesitshixo se-1.0905. Emva kokuqokelela phakathi kwe-1.08350 kunye ne-1.07700 yamanqanaba aphambili, le meko yafumana amandla. Ukulandela oko, amaxabiso aqhekeka kwicala elisezantsi. Kubonakala ngathi kukho ukubuyela umva njengoko intengiso iqala ukubuyisa inqanaba eliphambili le-1.0770. Ukulahlwa kwamaxabiso aliqela kwenzekile kufutshane neli nqanaba liphambili. Ngenxa yokuqokelelwa kwexabiso elijikeleze eli nqanaba, ixabiso le-EURCHF linokufumana amandla ngakumbi okuqhubela phambili okanye liqhubeke kwisalathiso salo se-bearish.
Nangona kunjalo, imarike igcine uluhlu olubalulekileyo phakathi kwenqanaba lokumelana ne-1.07700 kunye nenqanaba lenkxaso le-1.0700. Ixabiso liya kuqhubeka liqokelela ngaphambi kokuphuma. I-stochastic Oscillator kwitshathi yemihla ngemihla inika umnqamlezo ujikeleze inqanaba lama-50. Oku kubonisa ukungazithembi kwintengiso njengokwahluka kwawo. Oku kubonisa ukuba azikho iibhere okanye iinkunzi zeenkomo ezazizimisele ukwenza isigqibo esinqumlayo esisezantsi okanye esiphakamileyo njengoko intengiso iqhubeka nokuhla, ukuzama amanqanaba aphambili.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, imarike isekoluhlu kwaye iphinde izame amanqanaba aphambili. Njengamachaphaza amaninzi aboniswe kwiParabolic SAR (Yima kwaye uphinde ubuye umva). Oku kubonisa ukuqhubeka kwe-bearish. I-Stochastic Oscillator ibonisa imeko egqithisileyo, ebonisa ukuba intengiso inokubuyela umva kufutshane ne-1.07700. Oku kubuyela umva kunokuba yinto yokubuyisela kwinqanaba eliphambili lokumelana ne-1.07700 okanye ikhefu ngaphezulu kwayo.